Ukunyuka kweNtengiso yangaphakathi ngo-2015 | Martech Zone
Ukunyuka kweNtengiso yangaphakathi ngo-2015
NgoLwesibini, Juni 9, 2015 NgoLwesibini, Juni 9, 2015 UJenn Lisak Golding
Ngokwezigqibo zikaSirius, I-67% yohambo lomthengi ngoku kwenziwa ngokwamanani. Oko kuthetha ukuba phantse i-70% yesigqibo sokuthenga senziwe ngaphambi kokuba amathemba aqalise incoko enentsingiselo kunye nentengiso. Ukuba awuboneleli ngexabiso ngaphambi kokunxibelelana okokuqala ne-rep, ngokuqinisekileyo ngekhe ubangumntu olwela uthando lwakho.
Njengoko sonke sisazi, ukuthengisa ngaphakathi bekukhula kule minyaka imbalwa idlulileyo, kwaye kuyasebenza. Amathemba aphendula ngokuqinisekileyo kuthengiso lwangaphakathi lwentengiso kunye notshintsho kwindlela yokuthengisa, ngelixa uzityeshela iindlela eziqhelekileyo zemveli. Kodwa sisiqalo nje esi, kwaye eli shishini liza kuqhubeka likhula ngokuhamba kwexesha.
"Ukuthengiswa kwangaphakathi kukhula ngokukhawuleza kuxhomekeke kwindlela yokuziphatha, kwaye abameli bezentengiso kufuneka baziqhelanise ukuze baphumelele."
I-Salesvue, yethu oomatshini bokuthengisa ngokuzenzekelayo umxhasi, uvelise i-infographic, Ukunyuka kweNtengiso yangaphakathi ngo-2015, ehlola ixesha elidlulileyo, langoku kunye nekamva lokuthengisa.
Ngaphakathi ukuthengisa kukhula ngokukhawuleza ngama-300% kunentengiso yangaphandle.
Ngokwe-Harvard Business Review, ukubiza okubandayo AKUSEBENZI i-90.9% yexesha.
Izikhokelo eziphumayo zibiza inkampani yakho ngakumbi nangakumbi ngenxa yomzamo wokuzivala.
Ukuthengisa kwezentlalo kuya kuba yindawo eqhelekileyo.
Jonga i-infographic engezantsi ngolwazi oluthe kratya kuthengiso lwangaphakathi. Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-Salesvue kunye nesisombululo sabo sokuthengisa ngokuzenzekelayo, ucele idemo namhlanje.
tags: b2b ukuthengisaukuthengisa ngaphakathiAmanani entengisooomatshini bokuthengisaUkunika amandla ukuthengisaoomatshini bokuthengisa ngokuzenzekelayointengiso infographics
Iincwadi zokudlala zedijithali kunye neXesha elitsha lokuThengisa